Hong Kong: Nosavaina Ny Tranon’ny Mafana Fo Iray Noho Ny Fanendrikendrehana Ho Nisotasota Tamin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong: Nosavaina Ny Tranon'ny Mafana Fo Iray Noho Ny Fanendrikendrehana Ho Nisotasota Tamin'ny Aterineto
Voadika ny 16 Jolay 2012 3:46 GMT
Tamin'ny 13 Jolay 2012, nisy vondrona mpitandro filaminana nanafika an'i Yang Yang (solon'anarana) tany an-tranony, mafana fo any Hong Kong ka naka an-keriny ny solosaina, ny lohamilina ary ny findainy. Araka ny manampahefana, voalaza fa nanimba vohikala roa an'ny governemanta izy tamin'ny voalohandohan'ny volana lasa teo tamon'ny fomba fanafihana antsoina hoe Denial of Service (DOS). Nolavin'i Yang kosa anefa izany fanamelohana izany, ka nilaza izy fa tsy ny solosainy mihitsy no ho ampiasainy raha hijirika vohikala izany.
Ilay mafana fo any Hong Kong, Yang Yang dia nomelohina ho nanimba vohikala roa an'ny governemanta tamin'ny alàlan'ny Denial of Service (DOS). Sary avy amin'ny VJmedia
Nafana fo tokoa Yang Yang tamin'ny hetsika ara-tsosialy tany Hong Kong ary manana fifandraisana maro amin'ireo mafana fo amin'ny zon'olombelona ao Hong Kong sy any Shina. Anatin'ny fampielezan-kevitry ny vondrona politika mpanohitra antsoina hoe Herin'ny Vahoaka (People's Power) ihany koa izy ho an'ny fifidianana manaraka.
Nisava ny fonenany ny mpitandro filaminana tamin'ny 7ora maraina ny 13 Jolay 2012 niaraka tamin'ny fahazoana alalana hisavasava navoakan'ny fitsaràna ary nisambotra azy tamin'ny fanamelohana heloka bevava andininy faha-200 laharana 161: fidirana amin'ny solosaina entanin'ny filan-dratsy na filàna sotasota. Ny sazy farany ambony indrindra amin'izany heloka izany dia fidirana am-ponja hatramin'ny 5 taona.
Nilaza ny mpitandro filaminana fa nanimba vohikala roa an'ny governemanta nandritra ny 17 segondra tamin'ny volana lasa teo ny solosain'i Yang .
Taorian'ny nakàna azy am-bavany tany amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana, navotsotra vonjimaika Yang. Ao amin'ny lahatsary fanadihadiana iray ao amin'ny Facebook, nolavin'i Yang izany fanendrikendrehana izany: “amin'ny maha-manampahaizana momba ny aterineto ahy, tsy hanao fanimbàna adaladala tahaka izaony aho. Ny solosaiko ao an-trano ihany ve no ho ampiasaiko? Mampihomehy izany. Na ohatra aza ka tena nanao izany fanimbàna izany aho, tsy ho fantatr'izy ireo mihitsy.”
Izany fidinan'ny mpitandro filaminana teny an-toerana izany dia nitarika indrindra ny fivoahan'ny vaovao sy ny fifandraisana amin'ireo mafana fo momba ny zon'olombelona any Hong Kong sy any Shina, satria Yang Yang dia manohana ara-teknika ireo tambajotranà mafana fo mpandalo sisin-tany.
Iray volana lasa izay, nidinan'ny mpitandro filaminana ihany koa ny tranon'ny mpiara-miasa amin'i Yang Yang, Yang Kang, tsy nisy fanomezana alalana hisavasava akory. Yang Kang koa dia mafana fo amin'ny fampifandraisana ireo mafana fo momba ny zon'olomebelona any amin'ny kontinanta amin'ireo mitovy aminy any Hong Kong. Araka izany dia manahy Yang Yang fa namoron-dainga fotsiny ny mpitandro filaminana mba ahafahana maka ny solosainy.